🥇 ▷ BioWare waxay rajeyneysaa Anthem inuu "horumar iyo barwaaqo sannadaha soo socda" ✅
BioWare waxay rajeyneysaa Anthem inuu “horumar iyo barwaaqo sannadaha soo socda”
Inta lagu jiro sanadkaan 2019 waxaa jiray qaar ka mid ah cayaaraha loo asteeyay inay yihiin kuwa ugu muhiimsan sanadka, iyo mid ka mid ah ayaa ahaa Heesta, ciyaarta BioWare iyo Arts Arts. Si kastaba ha noqotee, inkasta oo ay u muuqatay inay wax badan ballan qaadday, haddana cinwaanka ayaa tartiib tartiib u noqday wax aan ahayn sidii waqtigii loo sii gudbayay, illaa heer in mid ka mid ah soosaarayaasha ugu sareeya uu ka tago shirkadda ka dib markii la bilaabay. Hadda, BioWare ayaa ku soo noqday goobta si tus kalsoonidaada kulankooda, oo muujinaya inay filayaan Isbeddel iyo barwaaqo sannadaha soo socda.
Tan ayaa la muujiyay Casey Hudson, oo ah madaxa BioWare, iyo yaa caddeeyay arrintaas “Waan ogahay inay jiraan shaqo badan oo loo baahan yahay in la qabto si loo garto kartida buuxda ee Anthem.” Dabcan, weedhahan, horumariye wuxuu isku dayaa inuu muujiyo dhammaan kalsoonida suurtagalka ah ee ciyaarta, isagoo si cad u muujinaya inay sii wadi doonaan horumarinta nuxurka cusub ee cinwaanka xitaa haddii sii-deyntiisu aysan sidii la filayay ahayn.
“Waxaan haynaa qorsheyaal horumarineed oo aasaasi ah, laakiin waxay u baahan doonaan waqti. In kasta oo kooxdu ay ka shaqeyso sidii ay u gaari lahayd himilo fog oo ciyaarta ah, waxay sidoo kale sii wadi doonaan bixinta macluumaadka iyo waxyaabaha ka kooban. Waxaan aaminsanahay Anthem iyo Waxaan jeclaan lahaa inaan arko adduunyada oo koraysa, isbeddelaysa oo barwaaqaysan sanadaha soo socda. “Casey Hudson ayaa yidhi.
iyada oo loo marayo: ComicBook